Huawei Mate 30 na 30 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na ụlọ ọrụ gọọmentị | Akụkọ akụrụngwa
Izu ole na ole gara aga, ika ahụ n'onwe ya kwadoro ya. Taa, Septemba 19 E gosipụtara Huawei Mate 30 na Mate 30 Pro na eze. Emere ihe ngosi na Munich nke anyi ji mara ebe ohuru ohuru nke akara ahia ndi China. A elu-elu dị ike ma kara aka na-enwe ihe ịga nke ọma ọhụrụ maka emeputa.
Izu ndị a enweela ụdị asịrị na nkọwa banyere Huawei Mate 30, mana n'ikpeazụ taa, anyị enweela ike ịmata ụdị ụlọ ọrụ ọhụrụ a. Dị ka ọ na-eme n'ọgbọ niile, ụlọ ọrụ na-ahapụ anyị na ama ndozi, ọzọ na mpaghara nke foto enwere mgbanwe.
Nhazi nke ekwentị abụọ a ka yiri ruo afọ gara aga. A na-eji kpochapụwo, nke a na-akpọkarị ọkwa, agbanyeghị na oge a ọ dị gịrịgịrị karịa afọ gara aga, n'ihe gbasara Mate 30 Pro. Ya mere, ọ naghị achịkwa ihuenyo ekwentị nke ukwuu n'echiche a. Modeldị nke ọma na-eji ọhụụ n'ụdị mmiri mmiri. Ebe ị ga - ahụ ọtụtụ mgbanwe dị n’azụ ekwentị abụọ ahụ, yana etu igwefoto ha siri dị.
1 Nkọwapụta Huawei Mate 30
2 Nkọwapụta Huawei Mate 30 Pro
Nkọwapụta Huawei Mate 30
Nke mbụ anyị na-elekwasị anyan ekwentị na-enye aha aha ọhụrụ a elu nke ika China. Ọ bụ ezigbo ihe nlere anya, yana ezigbo nkọwa yana nke na-ezute ihe niile anyị rịọrọ site na njedebe dị elu taa. Enweghị mkpesa na nke a. E tinyela nlebara anya pụrụ iche na foto na ekwentị, dịka anyị na-ahụ na ụdị ndị a dị elu nke akara ndị China. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Huawei Mate 30:
Nka na ụzụ nkọwa Huawei Mate 30
Nlereanya agbarịta 30
Atụmatụ ndị ọzọ Na ihuenyo mkpisiaka ihe mmetụta
Nkọwapụta Huawei Mate 30 Pro
Nke abụọ anyị hụrụ ekwentị kachasị ike nke ọhụụ ọhụrụ a dị elu nke akara ndị China. Huawei Mate 30 Pro nwere ihe niile iji bụrụ otu n'ime ekwentị ndị kacha ere ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ. E gosipụtara ya dị ka ekwentị dị ike, nwere njirimara teknụzụ dị mma, yana igwe foto dị mma. A elu-ọgwụgwụ nke nwere ike inye a otutu agha na ahịa. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu, nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'onwe ya:
Nka na ụzụ nkọwa Huawei Mate 30 Pro
Nlereanya Mate 30 Pro
Usoro njikwa Isi mmalite emeghe gam akporo na EMUI 10 na Huawei Mobile Services
Ihuenyo OLED 6.53 sentimita asatọ n’ibu
GPU Ogwe aka Mali-G76 MP16
Igwefoto na-aga n'ihu 40 MP + 40 MP + 8 MP + 3D ihe mmetụta miri emi
Njikọ 5G / WiFi 802.11 ac / Bluetooth / USB-C / Dual SIM / GPS / GLONASS
Atụmatụ ndị ọzọ Na-ihuenyo akara mkpisiaka mmetụta / NFC / 3D ihu ude
Batrị 4.500 mAh na 40 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Huawei Mate 30 na-eji ihe mmetụta okpukpu atọ na azụ na ụdị Pro na-eji ese foto anọ na nke a. A na-emezi ihe mmetụta na-eji mma. Na mgbakwunye inwe ọmarịcha mmụba n'ihe banyere ndekọ vidiyo.Karịsịa na ndekọ nwayọ na-adịghị nwayọ, enwere ike ịdekọ na 7680 fps na ụdị Pro a.N'ụzọ dị otú a, ọ karịrị ndị niile na-asọmpi ya, na-egosi ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ bụ ntụnye aka n'ọhịa nke foto na telephony.
Na mgbakwunye ịhapụ anyị data niile gbasara nkọwa ya, akara ndị China ekekọrịtala data igba egbe nke Huawei Mate 30 na Mate 30 Pro ndị a n'ahịa. Ndị a bụ ekwentị abụọ na-akpọ ka igbanye ọtụtụ mmasị na ahịa. Yabụ ịmata mgbe ewepụtara ha na ego ole ha ga-eri bụ ozi a na-atụsi anya ya ike. A ga-ebido ekwentị abụọ ahụ na anọ nke anọ nke afọ a. A na-atụle ụbọchị site na njedebe nke Ọktọba na Nọvemba, mana a na-atụ anya na a ga-ekpughere data niile n'ime izu ole na ole. Yabụ anyị ga-agwa gị karịa mgbe enwere data gbasara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Huawei Mate 30 na Mate 30 Pro: A na-emegharị ọhụụ dị elu